Andro Paska I & II 22-27 Avrily 2019 “Misandratra Kristy”
24 avril 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Andro Paska I & II 22-27 Avrily 2019
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Misandratra Kristy” dia manambara indrindra ny fanehoan’Andriamanitra ny voninahiny tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. Nasandratr’Andriamanitra Ray tokoa Jesosy Kristy Zanany satria nanome voninahitra Azy tamin’ny fankatoavana ny teniny sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Fa hoy Jesosy: “Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’izay naniraka Ahy. Ary izao no sitrapon’izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy, fa hatsangako indray amin’ny andro farany izy” Jao.6:38-39. Famelomana ny maty no hevitr’izany, dia isika maty noho ny ota, ”fa ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” (1 Kor.15:56a). Ho amin’izany, dia maty hamonjy antsika Kristy (Rom.5:8); fa raha maty Izy noho ny fahotantsika, dia nitsangana koa mba ho fananganana sy fanamarinana antsika izay maty noho ny tsy fahamarinantsika (Rom.4:25). Ary dia nanaiky hiaritra hatramin’ny fahatesana tokoa Izy mba hanangana antsika avy amin’ny fahafatesana ka ho velona tahaka Azy (Jao.14:19). Fa naka ny endrika maha-mpanota antsika Izy ary nanaiky hatramin’ny fahafatesana mba hankalazany ny Ray. Hoy ny tonom-bavaka nataony: “Izaho efa nankalaza Anao tetỳ ambonin’ny tany; vitako ny asa nomenao Ahy hataoko. Ary ankehitriny, Ray ô, mankalazà Ahy amin’ny tenanao, dia amin’ny voninahitra niarahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao” Jao.17:4-5. Ny voninahitr’Andriamanitra izay nisandratan’i Jesosy dia ny nandreseny ny fasana ka nitsanganan’ny tenany tamin’ny maty; ary dia tanteraka sy niseho tamin’izany ny fahefana feno izay nomena Azy, dia Izy velona sy afaka hamelona na dia ny maty aza (Jao.11:25). Fa nitsangana Jesosy, ary velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita (Apok.1:18). Amin’izany, dia hoy Paoly Apostoly: ”Mahatoky izao teny izao: Fa raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa” 2 Tim.2:11. ”Minoa an’i Jesosy Tompo, dia ho velona hianao” !
Alatsinainy 22: Andriamanitra manandratra ny Mpanompony.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia manome voninahitra izay manome voninahitra Azy (1 Sam.2:30) ka dia noho izany no anandratany ny Mpanompony. Fa ny hankalaza sy hanome voninahitra ny Ray no anton’ny nahatongavan’i Jesosy, ka nanekeny hanao ny sitrapony, dia ny niaretany hatramin’ny fahafatesana ho fanavotana ny mpanota. Fa voasoratra hoe: ”Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8.
Talata 23: Kristy, fanavotana ho an’ny olony.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no ilay Zanak’ondry tsy misy pentina nomen’Andriamanitra mba hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao (Jao.1:29). Fanatitra nankasitrahan’Andriamanitra tanteraka Izy noho Izy nanao ny sitrapony. Fa“Amin’izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin’ny nanaterana ny tenan’i Jesosy Kristy indray mandeha” Heb.9:8.
Alarobia 24: Kristy nandresy ny fasana.
Fitarihan-kevitra: Toy ny nananganan’i Jesosy an’i Lazarosy no nitsanganany koa tamin’ny alalan’ny herin’ny Fanahin’Andriamanitra izay mahay manangana na dia ny maty aza (Rom.4:17). Ny fitsanganan’i Jesosy dia hafatra lehiben’ny Filazantsara mba hampitraka antsika olombelona milofika noho ny ady maro sy noho ny fahalementsika, sady fitaomana antsika hitady Ilay velona mandrakizay. Ho an’izay rehetra mino ny fitsanganany tamin’ny maty, dia hoy Jesoy: ”Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b.
Alakamisy 25: Kristy manafaka ny olona.
Fitarihan-kevitra: Feno sy tanteraka ny fanafahana omen’i Jesosy ny olona, satria noraisiny teo amin’ny tenany ny momba azy manontolo araka ny voasoratra hoe: “fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesan’ny hazo fijaliana” Fil.2:7-8 . Ary dia foana niaraka tamin’ny fahafatesan’i Jesosy ny asa maty rehetra amintsika (Heb.9:14): ny ota, ny fahalovana, ny fahafatesana, ny tsy finoana! “Fa raha misy olona ao aman’i Kristy, dia olom-baovao” 1 Kor.5:17a, dia olona velona!.
Zoma 26: Kristy manangana ny mpanota.
Fitarihan-kevitra: Hoy i Paoly Apostoly: “Iza no hanafaka ahy amin’ity tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24, izany hoe hanova azy mba hitafy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra (1 Tim.2:2). Ny olombelona namany va? Sanatria izany. Izy tenany va? Vao mainka koa. Tonga ny Kristy Mpanompon’i Jehovah “hitory fanafahana amin’ny babo” Isa.61:1d, dia izay voafatotry ny ota sy ny toetra maha-mpanota izay mahameloka azy. Ho an’izay mitady famelan-keloka sy fiovàna marina dia tanterahin’i Jesosy ny teny nataony tamin’i Zakaiosy manao hoe: “Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena” Lio.19:9a.
Sabotsy 27: Kristy manangana ny maty.
Fitarihan-kevitra: Toetra maha-Andriamanitra sady Mpamonjy an’i Jesosy indrindra ny manangana ny maty sy manome fiainana. Sambatra izay mino Azy, fa “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36. Ho an’izay mitady ny famonjeny dia mbola vonona Izy hanao aminy hoe: “Hoy Izaho aminao, mitsangàna!” Mar.5:41.
Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB “Hira sy Filazantsara”. Henoy “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet